Maaddaama boodhadhyo iyo degello intan ka badan la daabacayo maalin kasta, welwelka guud ee la qabo ayaa ah xatooyo sawirro aad soo iibsatay ama aad u sameysay si shaqsiyeed ama xirfad-yaqaannimo ah. TinEye, Mashiinka raadinta muuqaalka gadaal, wuxuu siinayaa dadka isticmaala awood ay ku baaraan url gaar ah sawirada, halkaas oo aad ka arki karto inta jeer ee sawirada laga helay shabakada iyo halka loo adeegsaday.
Haddii aad ka iibsatay sawir kayd ah ilaha sida kafaala-qaadeena Depositphotos, ama Istockphoto or Getty Images, Sawiradaas waxaa laga yaabaa inay soo baxaan natiijooyinka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, haddii aad sawir qaadatay ama aad abuurtay sawir lagu dhejinayo internetka, waxaad tahay milkiilaha sawirkan.
Haddii aadan si cad u siinin isticmaalaha inuu isticmaalo sawiradaada ama aysan u nisbeyn doonin sawirkaaga haddii aad ku dhejiso meelo sida Creative Commons, markaa waxaad xaq u leedahay inaad tallaabo sharci ah ka qaaddo shakhsiyaadkaas.
Qaar ka mid ah astaamaha waaweyn ee TinEye waxaa ka mid ah:
Muujisaa sawirrada maalinlaha natiijooyinka raadinta ee ugu wanaagsan, ku dhowaad 2 bilyan illaa hadda
Waxay bixisaa a ganacsiga API inaad la jaanqaadi karto dhamaadka dhabarka boggaaga
Soo Jeediyay plugins daalacashada badan ee raadinta habboon
Guud ahaan, TinEye waxay u sahlaysaa shaqsiyaadka inay ilaashadaan sawiradooda iyo hantidooda elektarooniga ah. Hubso inaad tusto sawirrada aad leedahay ama aad abuurtay oo aad ka warbixiso kuwa la xaday.
Tags: raadinta sawirkamashiinka raadinta sawirkaraadinta muuqaalka koretineye
Milkiilayaasha meheradaha yaryar iyo naqshadeeyayaasha websaydhada intabadan waxay sameeyaan khalad ah inay u maleeyaan inuu sawirku bilaash yahay maxaa yeelay waxay ka heleen webka. Maaha iyo barnaamijyada sida TinEye oo ka caawiya sawir qaadayaasha inay ka ilaaliyaan adeegsiga aan la ogoleyn ee sawiradooda, sidoo kale waxay dhaawici karaan milkiilayaasha meheradaha yar yar ee aan ka warqabin inay isticmaalayaan “sawirka la maareeyay xuquuqda” ilaa ay goori goor tahay.
Xalkayaga, ku dhaji sawirada asalka ah, ama ilaha sida iStock iyo Photos.com